Mmiri & Oge ọkọchị
Isi ala baseball
Ogwuregwu ndi okenye
Ngwaahịa Egwuregwu Kidsmụaka
Akpa Egwuregwu ụmụaka
Ngwa egwuregwu ụmụaka
Olu Ohiri Isi
Flying Tiger CSR omumuihe 2020 - Shanghai
Emere seminarị 2020 Flying Tiger CSR na Shanghai na Ọktọba 27. AS kacha elu 20 ndị na-eweta ngwaahịa, anyị nwere nnukwu asọpụrụ ịbịa nzukọ ọmụmụ ihe a. Nzukọ ọmụmụ ihe ahụ lekwasịrị anya n'isiokwu abụọ nke mmepụta nkwenye na nyocha dị mma. Site na ọzụzụ a, ndị sonyere nwere ezigbo mma ...GỤKWUO »
Na October 17th, ndị ọrụ ibe si ngalaba azụmaahịa mbụ dị njikere ịga Ọdọ Mmiri Qiandao mara mma, oge awa obi ụtọ na-amalite! Ihu igwe n’ụbọchị ahụ na-enye ume ọhụrụ, ma ọmarịcha ụzọ ya dịkwa mma. The emerald green ahịhịa na dị iche iche ụlọ ...GỤKWUO »
Na Eprel 2019, nke abụọ nke 125th China Import and Export Fair (nke a na-akpọ "Canton Fair") meghere nke ọma na Guangzhou Pazhou International Convention na ...
Na Eprel 2019, nke abụọ nke 125th China Import and Export Fair (nke a na-akpọ "Canton Fair") meghere nke ọma na Guangzhou Pazhou International Convention and Exhibition Center. Companylọ ọrụ anyị zigara ndị otu azụmaahịa 7 ka ha weta 2019 ngwaahịa ọhụrụ na Canto ...GỤKWUO »
-Adịghị agwụ agwụ ọganihu- na Mia Creative 2018 Nzukọ Kwa Afọ
Oge na-efegharị, na ntabi anya, 2018 na-arụsi ọrụ ike agaala, na olile anya ọhụrụ nke 2019 abịala. Na Jenụwarị 28th, F&S 2019 Nzukọ Kwa Afọ emere na Sanding New Century Grand Hotel. Na nzukọ kwa afọ, njikwa ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ibe ya gbakọtara iji chịkọta ...GỤKWUO »
Nke 126th Canton Fair meghere grandly na Guangzhou Pazhou Hall.
Nke 126th Canton Fair meghere grandly na Guangzhou Pazhou Hall. Ihe ngosi Canton, nke a na-ahụta dị ka oghere nke mbupụ nke China, agafeela ogologo oge nke ihe karịrị ọkara narị afọ maka oge karịrị 100. Kemgbe nguzobe anyị na 2007, anyị nwere ...GỤKWUO »
Zukọta iji mepụta Ọgbakọ Kwa Afọ nke 2020 n'ọdịnihu
Zukọta iji mepụta Ọdịnihu Ann 2020 Nzukọ Kwa Afọ n'amaghị, ọ bụ njedebe nke afọ ọzọ. Na Jenụwarị 20th, nzukọ 2020 kwa afọ nke Mia Creative e mere na Shangri-La Hotel. Anyị zukọtara iche echiche banyere ọdịnihu. Ná mmalite nke nzukọ ahụ, Ou ...GỤKWUO »